Maamulka Puntland oo dhagax dhigay cisbitaal iyo machad cusub “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Maamulka Puntland oo dhagax dhigay cisbitaal iyo machad cusub “SAWIRRO”
Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa maanta dhagax dhigay cisbitaal iyo machad caafimaad oo ay dhisanayaan dhakhaatir ka soo jeedda deegaannada Puntland, si loogu adeego bulshada halkaasi ku nool.
Xafladda dhagax dhiga waxaa ka soo qeyb-galay Gudoomiyaha Baaralamaanka Puntland Siciid Xassan Shire, Wasiiro ka tirsan xukuumadda Puntland, Taliyaha ciidamada Puntland Siciid Maxamed Xirsi, Dhakhaatiir, saraakiil ciidan iyo mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Maamulkaasi.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Siciid Xassan Shire ayaa dhankiisa si aad ah u soo dhaweeyey talaabada wanaagsan ee ay qaadeen dhakhaatiirta ee ku aadan dhismaha Isbitaalka iyo Machadka.
Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa sheegay in xaruntaan caafimaad looga baxi doono baahida caafimaad ee dadka reer Puntland haysata.
”Siyaasadeenu waxa weeye inaanu soo dhaweyno dhammaan qurbo-joogta Soomaaliyeed ee dooneyso inay halkaan ka hirgeliyaan mashaariic kala duwan ee wax loogu qabanayo bulshada deegaannada ku nool, waxaana si gaar ah uga mahadcelinaynaa dhaqaatiirta u istaagtay in ay u adeegaan bulshadooda” ayuu yiri Eng, Cabdixakiin Cameey.
Qurba-joogta reer Puntland iyo shirkado caalami ah ayaa hada ku howlan sidii ay maalgashi uga samaysan lahaayeen guud ahaan deegaannada maamulka Puntland.
Jaamacadda Jamhuuriya iyo Jimciyadda ASAL oo siminaar u qabtay arday “SAWIRRO”
Olole nadaafadeed oo ka bilowday degmada Lafoole